ကင်ဆာရောဂါသည် ကလေးငယ်လေးကို ဆေးကုသပေးနေတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ” ကလေးငယ်လေးရဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေကြောင့် စိတ်မကောင်းဖြစ် – Tameelay
ကင်ဆာရောဂါသည် ကလေးငယ်လေးကို ဆေးကုသပေးနေတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ” ကလေးငယ်လေးရဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေကြောင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်
ပရဟိတမင်းသမီးအဖြစ် ပရိသတ်တွေ တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ မင်းသမီး ခိုင်နှင်းဝေကတော့ အရိုး ကင်ဆာရောဂါဝေဒနာကို ခံစားနေရတဲ့ ကလေးမလေးတစ်ဦးကို ဆေးကုသပေးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်..။
ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ(၁၂)ရက်နေ့လေးမှာတော့ ကင်ဆာရောဂါသည် ကလေးမလေးဆီ သွားရောက်ပြီး အားပေးစကားများ ပြောခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်..။
ကလေးငယ်လေးရဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေကြောင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းလေးကိုလည်း ခိုင်နှင်းဝေက သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာကနေ ပရိသတ်တွေကို ပြန်လည်မျှဝေထားပါသေးတယ်..။
“ကျမ ဆေးကုသပေးနေသော အရိုးကင်ဆာရောဂါ ခံစားနေရသော သမီးလေးဆီ ဒီနေ့သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်.. သမီးလေးက အရင်က ဆံပင်အရှည်လေး .အခု ကင်ဆာဆေးသွင်းနေရတော့ ဆံပင်တွေ ကျွတ်လို့ ကတုံး လေးတုံးထားရတယ်..
ဒီသမီးလေးက မြစ်ကြီးနားကနေ ရန်ကုန်ကို ဆေးကုဖို့လှမ်းခေါ်ခဲ့တယ်.. သမီးလေးကို ဆေးကုသစရိတ်. သူတို့မိသားစုနေစရိတ်. စားစရိတ်အားလုံး ကျမ ထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်..
အခု ကင်ဆာရောဂါကြောင့် ခြေထောက်တဖက်လဲ ဖြတ်လိုက်ရပြီ. အဆုတ်ထဲမှာလဲ ကင်ဆာဆဲလ်တွေပျံ့နှံ့နေတယ်.. ကျမရင်ထဲ မကောင်းလိုက်တာ.. ဒီနှစ် ၅ တန်းတက်ရမှာ မတက်လိုက်ရလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ သမီးလေးကို နေကောင်းရင် ကျောင်းဆက်တက်ရမယ်လို့ ကျမအားပေးခဲ့ပေမဲ့ ကျမရင်ထဲ အားမရှိဘူးဖြစ်နေတာကို သမီးလေးမရိပ်မိအောင် ကြိုးစားနေခဲ့တယ်..
သမီးလေးနာမည်က နန်းဆုပြည့်ဝင်းတဲ့.မျက်နှာလေးကနန်းဆန်ပြီး ဆုတောင်းတွေပြည့်ပါစေသမီးလေးရယ်…” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်..။
မင်းသမီး ခိုင်နှင်းဝေကတော့ အနုပညာလောကမှာ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကို အခိုင်အမာရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသလို လှူဒါန်းမှုတွေနဲ့ ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေမှာလည်း တစိုက်မတ်မတ်နဲ့ လုပ်ဆောင်နေတာ တွေ့ရပါတယ်..။
ထို့ပြင် ကလေးသူငယ်လူကုန်ကူးမှု တားဆီးရေးဆိုင်ရာ အထူးသံတမန်အဖြစ် ခန့်အပ်ခံထားရသူဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာလည်း အမျိုးသမီးများနဲ့ ကလေးငယ်တွေအတွက်လည်း အမြဲ ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်နေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်..။
Source – ခိုင်နှင်းဝေ
ိုပရဟိတမငျးသမီးအဖွဈ ပရိသတျတှေ တငျစားချေါဆိုတဲ့ မငျးသမီး ခိုငျနှငျးဝကေတော့ အရိုး ကငျဆာရောဂါဝဒေနာကို ခံစားနရေတဲ့ ကလေးမလေးတဈဦးကို ဆေးကုသပေးနတေယျလို့ သိရပါတယျ..။
ယနေ့ ဖဖေျောဝါရီ(၁၂)ရကျနလေ့ေးမှာတော့ ကငျဆာရောဂါသညျ ကလေးမလေးဆီ သှားရောကျပွီး အားပေးစကားမြား ပွောခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ..။
ကလေးငယျလေးရဲ့ ကနျြးမာရေး အခွအေနကွေောငျ့ စိတျမကောငျးဖွဈရတဲ့ အကွောငျးလေးကိုလညျး ခိုငျနှငျးဝကေ သူမရဲ့ ဖစျေ့ဘှတျစာမကျြနှာကနေ ပရိသတျတှကေို ပွနျလညျမြှဝထေားပါသေးတယျ..။
“ကမြ ဆေးကုသပေးနသေော အရိုးကငျဆာရောဂါ ခံစားနရေသော သမီးလေးဆီ ဒီနသှေ့ားရောကျခဲ့ပါတယျ.. သမီးလေးက အရငျက ဆံပငျအရှညျလေး .အခု ကငျဆာဆေးသှငျးနရေတော့ ဆံပငျတှေ ကြှတျလို့ ကတုံး လေးတုံးထားရတယျ..
ဒီသမီးလေးက မွဈကွီးနားကနေ ရနျကုနျကို ဆေးကုဖို့လှမျးချေါခဲ့တယျ.. သမီးလေးကို ဆေးကုသစရိတျ. သူတို့မိသားစုနစေရိတျ. စားစရိတျအားလုံး ကမြ ထောကျပံ့ပေးနပေါတယျ..
အခု ကငျဆာရောဂါကွောငျ့ ခွထေောကျတဖကျလဲ ဖွတျလိုကျရပွီ. အဆုတျထဲမှာလဲ ကငျဆာဆဲလျတှပြေံ့နှံ့နတေယျ.. ကမြရငျထဲ မကောငျးလိုကျတာ.. ဒီနှဈ ၅ တနျးတကျရမှာ မတကျလိုကျရလို့ စိတျမကောငျးဖွဈနတေဲ့ သမီးလေးကို နကေောငျးရငျ ကြောငျးဆကျတကျရမယျလို့ ကမြအားပေးခဲ့ပမေဲ့ ကမြရငျထဲ အားမရှိဘူးဖွဈနတောကို သမီးလေးမရိပျမိအောငျ ကွိုးစားနခေဲ့တယျ..
သမီးလေးနာမညျက နနျးဆုပွညျ့ဝငျးတဲ့.မကျြနှာလေးကနနျးဆနျပွီး ဆုတောငျးတှပွေညျ့ပါစသေမီးလေးရယျ…” ဆိုပွီး ရေးသားထားတာ ဖွဈပါတယျ..။
မငျးသမီး ခိုငျနှငျးဝကေတော့ အနုပညာလောကမှာ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးခဈြခငျမှုတှကေို အခိုငျအမာရရှိပိုငျဆိုငျထားသလို လှူဒါနျးမှုတှနေဲ့ ပရဟိတလုပျငနျးတှမှောလညျး တစိုကျမတျမတျနဲ့ လုပျဆောငျနတော တှရေ့ပါတယျ..။
ထို့ပွငျ ကလေးသူငယျလူကုနျကူးမှု တားဆီးရေးဆိုငျရာ အထူးသံတမနျအဖွဈ ခနျ့အပျခံထားရသူဖွဈပွီး နောကျပိုငျးမှာလညျး အမြိုးသမီးမြားနဲ့ ကလေးငယျတှအေတှကျလညျး အမွဲ ပါဝငျကူညီဆောငျရှကျနသေူလညျး ဖွဈပါတယျ..။
Source – ခိုငျနှငျးဝေ
သစ်ပင်မြင့်ရင် လေတိုက်တာ ခံရတယ်” လို့ ဆိုလာတဲ့ ဖြူဖြူထွေး
“သစ်ပင်မြင့်ရင် လေတိုက်တာ ခံရတယ်” လို့ ဆိုလာတဲ့ ဖြူဖြူထွေး ဖေ့စ်ဘွက်မှာနာမည်ရနေတဲ့ ကျောင်းသူလေး ဖြူဖြူထွေးတစ်ယောက်ကတော့ သစ်ပင်မြင့်ရင် လေတိုက်တာ ခံရတယ် လို့ ပြောလာပါတယ်။ ကျောင်းတက်နေရင်း ဟာသဗွီဒီယိုဖိုင်လေးတွေ ဖေ့စ်ဘွက်မှာတင်ရာက အောင်မြင်လာတဲ့ သူမက ခုတော့ အနုပညာအခွင့်အလမ်းတွေ ရနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ (ဒီဇင်ဘာလ …
ယခုလာမည့် ၂၃ ရက်တွင် ကျင်းပမည့် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆုအတွက် အကယ်ဒမီရရှိမည့် ဒီသတင်းကို မှန်ကန်မှုမရှိစုံစမ်းခဲ့ရာ အနုပညာရှင်အသိုင်းအဝိုင်းမှ အမည်မဖော်လိုသူတစ်ဦးမှ မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်။ ပေါက်ကြားလာတဲ့သတင်းများအရ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆုကို နေဝင်အိပ်တန်းတက် ဇာတ်ကားဖြင့် ပြေတီဦး၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆိုကို ရင်ဘက်ထဲကဓား ဇာတ်ကားဖြင့် …
ဆံပင်ပြေးညှပ်ချင်လောက်အောင် ဆွဲဆောင်ခဲ့တဲ့ ဆယ်လီမမများ
ဆံပင်ရှည်မှ လှတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ အမြဲတမ်းတော့ မမှန်ပါဘူး။ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ဆယ်လီတွေကြားမှာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဆံပင်အတိုစတိုင်လေးတွေ ခေတ်စားလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဆယ်လီမမတွေ တော်တော်များများ Short Hairstyle လေးတွေ ပြောင်းလိုက်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကို ဆံပင်ပြေး ညှပ်ချင်လောက်အောင် ဆွဲဆောင်လိုက်တဲ့ ဆယ်လီမမတွေကို Shwemom စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးအတွက် …